अक्सर यसको छिमेकी संग सम्बन्ध क्षतिग्रस्त हुन सक्छ कारण तपाईंले तिनीहरूलाई गल्ति भर छ भन्ने तथ्यलाई गर्न। मात्र यो, त्यहाँ सम्बन्ध को एक गिरावट छ किनकी, perpetrator घरमा र छिमेकी देशहरूमा मरम्मत को एक धेरै रकम खर्च गर्न छ, छ। यी समस्याहरू बच्न तल्ला waterproofing कुशलतापूर्वक र मजबूती गर्नै पर्छ बाथरूम मा।
हाल, विभिन्न सामाग्री को एक विस्तृत विविधता छन्, तर सबै भन्दा लोकप्रिय र waterproofing छन् लोकप्रिय सामाग्री, CERESIT, IVSIL, GLIMS जस्तै यस्तो चिरपरिचित कम्पनीहरु द्वारा उत्पादित गर्दै छन् जो। बाथरूम मा तल्ला को waterproofing टाँस्न विधि वा धुन तरिका गरेको छ। यो सबै सतह, साथै यो आवश्यक काम पूरा गर्न आवश्यक छ जसको लागि अवधि भर पर्छ।
यदि waterproofing बाथरूम मा तल्ला रोल सामाग्री पलिएस्टर वा फाइबर सिसा संग प्रबलित जो, वा कोलतार आधार छ प्रयोग फिर्ता-अस्तर विधि चल्छ। उत्तरार्द्ध बिछाउने, यो एक बर्नर प्रयोग गर्न आवश्यक छ, र सबै अरूलाई आत्म-टास्ने आधार हो। आफ्नो स्टाइल मा मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणस्तरीय र सही अंकन सामाग्री छ।
रोल को मद्दतले बाथरूम मा तल्ला को waterproofing सधैं सानो कोठा मा उपयोगी छन्। Okleechnaya पनि थप विश्वसनीय तरिका, तर यो खपत समय र श्रम छ। कोलतार प्रयोग गर्दा आधार त्यहाँ एउटा अप्रिय गन्ध भएकोले सञ्चालन समयमा राम्रो वेंटिलेशन हुनुपर्छ। तर फाइदा तुरुन्तै सामाग्री को बिछाउने पछि यो जान सम्भव छ भन्ने छ। तर कमियां को एक कोठा को उचाइ केही सेन्टिमिटर कम छ भन्ने छ।
कोटिंग विधि को बाथरूम मा तल्ला को waterproofing थप सार्वभौमिक र यसैले आधुनिक निर्माण मा अधिक अक्सर प्रयोग गरिन्छ। यो विधि यसको सादगी र दक्षता द्वारा विशेषता छ। काम को यस प्रकार पूरा छैन जो आफ्नो समयमा समय बचाउँछ कुनै पनि प्रिपेरेटरी काम, सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। कोलतार र बहुलक आधारित र बहुलक-सिमेन्ट र सिमेन्ट पुटीन, र विभिन्न Sealants रूपमा मास्टिक लागू हुन्छ।
सबै भन्दा साधारण कोलतार-बहुलक र कोलतार-रबर सामाग्री छन्। यी सामाग्री को गुण कारण, तिनीहरूले सतह राम्रो पालन र बाह्य कारक को एक किसिम गर्न प्रतिरोधी हो। अलिकति कोठा को उचाइ कम जो screed, स्थापित गर्न पहिलो र दोस्रो मामला मा रूपमा।
अक्सर सिमेन्ट र सिमेन्ट-बहुलक pastes प्रयोग waterproofing बढि परम्परागत विधि प्रयोग। आफ्नो तयारी लागि सिमेन्ट पानी, र बहुलक excipient आवश्यक छ। इन्सुलेशन यस प्रकारको उच्च स्थायित्व र विश्वसनीयता छ, र बेफाइदा पनि तयार मिश्रण राख्नु धेरै छिटो हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले यो एक लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा उन्नत polyurethane सीलेंट को एक मास्टिक छ। यो जोइन्टहरूमा सिर्जना गर्न गर्दैन र सूक्ष्मजीवहरु को एक किसिम विरुद्ध सुरक्षा एकल घटक सामाग्री छ कि अलग, र यो तुरुन्तै टाइलहरू गोंद गर्न सम्भव छ। कोटिंग को waterproofing विधि सानो स्पेस जहाँ यो एक रोलर वा ब्रश संग लागू गर्न सकिन्छ लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ। जोडों र seams को छाप पूरा गर्न, एक्रिलिक ठूलो वा Sealants लागू हुन्छ।
Waterproofing को काठ तल्ला बाथरूम मा गरिन्छ कि त कोलतार प्रयोग गरेर, वा एक-घटक polyurethane मास्टिक को माध्यम द्वारा। यो बाद रक्षा गर्न अनुमति दिन्छ को काठ तल्ला किरा को एक किसिम र वाष्प तंग देखि। साथै, मास्टिक यस प्रकारको विशेष गरी उपयोगी छ जो -40 +90 डिग्री देखि तापमान दायरामा यसको विशेषताहरु राख्छ गाउँमा घरहरू वा कटेज।
मरम्मत को यस प्रकारको सञ्चालन गर्दा प्रविधिको गर्न कडाई पालन गर्न आवश्यक छ, र काम मात्र सकारात्मक तापमान मा गरिन्छ र चिस्यान 60% भन्दा उच्च हुनु हुँदैन।
बच्चा जन्म पारस्परिक स्नान: को पुतली-RSSI लागि ठूलो सहायक र आफ्नो बच्चाको लागि भावना धेरै
स्नान फिलर: प्रयोगकर्ता समीक्षा
स्नान निर्माण: स्थापना र मरम्मत विशेषताहरु
तल्ला देखि स्नान को अधिकतम उचाइ तपाईं कसरी गणना गर्छन्?
त्रिएक-Sergius मरुभूमि: फोटो, वास्तुकला। त्रिएकको-Sergius मरुभूमि कुन हो?
Headrest मनिटर - यो एक लक्जरी छ
अँध्यारो रोलर अंधा - सञ्चालन र मर्मत
अवसाद लोक उपचार को उपचार
भेला घण्टी खुर्सानी बढ्न? रोपण र हेरविचार विशेष गरी छन्
Alain Delon: पौराणिक फ्रान्सेली अभिनेता को Filmography। सबै भन्दा राम्रो फिल्म Alena Delona
भेनस Flytrap: घरमा हेरविचार र एक फूल विशेषताहरु